IZIHLANGU EZI-15 EZIBALASELEYO ZABAFAZI NGO-2021, NGOKWEEPODIATRISTS - UMSEBENZI WOKUSEBENZA
I-15 yeeNdawo zokuSebenza zaBasetyhini eziBalaseleyo ngo-2021, ngokweePodiatrists
Nokuba ungumdyarho onamava okanye i-5K newbie, ukukhetha ezona zihlangu zibalekayo yeyona nto ilandelayo ibaluleke kakhulu ekukhetheni isicwangciso soqeqesho esifanelekileyo. Njengomdlali, uyazi ukuba izixhobo zakho zinempembelelo enkulu ekusebenzeni kwakho njengokutya kunye nokuzilolonga rhoqo-kodwa ukukhetha izihlangu kunokuba nzima kunokuzilolonga kwakho.
Ngokuqinisekileyo unokuhamba ubaleka nakweyiphi na iipaili ezindala, kodwa izihlangu ezibalekayo zakhiwe ngokukodwa ukukhusela iinyawo zakho kwaye zikugcine ukhululekile, nokuba umgama ungakanani na. Izona zihlangu zibalekayo zihlala zibandakanya ezi zinto ziphuculweyo:
Ukuxhaswa okuxhasayo kwiingqameko kunye nezithende
Ebanzi, iibhokisi zenzwane ezijikelezileyo
Ukuphefumla, ukuguquguquka kwezinto eziphezulu
Iikomityi ezinzulu zezithende zozinzo
Kukwakho nezinto ezizodwa zokuqwalaselwa kwabasetyhini ekufuneka bezithathele ingqalelo xa bethenga izihlangu zokubaleka, ezihlala ziluhlobo nje olulinganisiweyo lwezihlangu zamadoda. Izicathulo zamabhinqa ngokubanzi zibanzi kwiinyawo zangaphambili kunye neenzwane kunye nokunciphisa isithende. Izicathulo zamadoda zikhulu, ngokubanzi, zichaza URebecca Pruthi, D.P.M. , ugqirha wezilwanyana kunye nomnini Ukhathalelo lweenyawo eManhattan .
Ngenxa yoku, abasetyhini bafuna izihlangu zokubaleka ngokukhwankqiswa ngakumbi. Abasetyhini, ngokomndilili, banobunzima obungaphantsi kwamadoda obude obulinganayo kunye nobungakanani beembadada. Ke ngoko, i-midsole kwisihlangu sowasetyhini yenzelwe ukugcina ifuthe elincinci njengoko unyawo lubetha emhlabeni, utshilo uGqirha Pruthi. Izihlangu zokubaleka zabafazi zihlala ziqulathe ukukhanya kunye nokuthamba okuphakathi kunenguqulo yamadoda, nayo.
Ungazikhetha njani ezona zihlangu zibalekayo zabafazi
Kukho ukhetho lwezihlangu ezibonakala zingenasiphelo, zisenza ukuba kube nzima nakwezona mbaleki zinamava ukuba zinciphise ukhetho lwabo. Ukulingana ngokufanelekileyo kubaluleke kakhulu, utshilo uGqirha Pruthi. Izihlangu kufuneka zibeligumbi elinobuncinane bendawo yomnwe ububanzi okanye i-1/2-intshi ukusuka kwinzwane ende. Gcina ezi ngcebiso engqondweni, nazo.
Qonda indlela obaleka ngayo. Ngaba uhambisa iinyawo zakho ngaphakathi (aka pronate), ubaleke ungathathi cala, okanye ugadle ngezithende zakho? Ukuba uwela kudidi lokugqibela, uGqr. Pruthi ucebisa ukuba ujonge phambili, okanye izihlangu ngenkxaso yeenyawo zangaphambili kunye nesithende esiphakamileyo, esivumela ukuba utshintshe ukusuka kugwayimbo uye kwiinzwane zakho.
Thenga iinyawo zakho. Abafazi abane iinyawo ezicaba Kuya kufuneka ujonge izihlangu ezibalekayo ngebhokisi ebanzi yeminwe, iiringi ezifakwe kakuhle, kunye nenkxaso kwisithende ukubonelela ngozinzo nokubamba unyawo endaweni. Kwelinye icala, abasetyhini abanesifo isityalo fasciitis Ufuna i-arch eyaneleyo kunye nenkxaso yesithende, kunye ne-midsole eguqukayo yokuhambisa kwakhona ubunzima, uGqirha Pruthi uyacacisa. Abantu abane iibhanyoni Kwakhona kufuneka ibhokisi ebanzi yeminwe.
Cinga ukusebenzisa ii-insoles. Insoles okanye i-orthotic yesiko inceda ukunciphisa uxinzelelo kwiiarches kunye nokunciphisa uxinzelelo kubantu abane-fasciitis yesityalo. Ngokususa i-insole kwi-sneaker kwaye ubeke endaweni yayo isixhobo esingaphezulu kwekhawuntareni, unokukwazi ukufikelela kwinkxaso eyoneleyo kwaye unciphise ukubiza, utshilo uGqirha Pruthi. Ukunciphisa ukubizwa kwakhona kunceda ukunciphisa uxinzelelo kwiibhonki kunye nokuxhasa unyawo lonke.
Dibana nengcali. Nokuba unayo umba wonyawo okanye akunjalo, kungcono ukufumana uvavanyo lweembadada ezinobungcali kunye ne-podiatrist okanye umqeqeshi obalekayo ukuze ufumane isixa esifanelekileyo ngaphambi kokuba uchithe imali eninzi kwisibini esingalunganga. Ugqirha weenyawo unakho ukuxelela ukuba uyakufuna inkxaso engaphezulu kwiiarches zakho okanye isithende, kwaye ube nakho ukucebisa ngesihlangu esifanelana neemfuno zakho. (Ingcebiso yepro: Zama izihlangu ekupheleni kosuku xa imilenze neenyawo zidumbile .)
Ukukhetha ezona zihlangu zibalekayo kuthatha ulingo kunye nempazamo, ke kubalulekile ukuba uzame izibini zeteki kwaye ubone indlela oziva ngayo kuzo ngelixa ubaleka ngaphambi kokuthatha isigqibo sokuzithenga. Andiqinisekanga ukuba ungaqala ngaphi? Ngaphambili, siqhekeza izihlangu zethu ezithandayo zokubaleka kwabasetyhini, zonke zivunyiwe ngoogqirha.
Yonke imayile enye iziva ingenabunzima ngesibini kwezi zihlangu zokubaleka zixhasayo. I-Brooks Levitate 4 lukhetho olufanelekileyo kubafazi abane-plantar fasciitis kuba bane-midsole ephendulayo neyomileyo, intsingiselo Ngokwenyani bamba amandla kumda ngamnye, ukukunceda ukuba ubaleke ngokukhawuleza ngaphandle kwentlungu . Banikezela ngentla ethambileyo, eguqukayo ephezulu kunye nekhola yozinzo kunye nenkxaso eyongezelelweyo.
I-midsole ekhutshiweyo inokunceda abantu abaneenyawo ezicabaleleyo, njengoko izokunceda kwiintlungu ezinokubakho, uthi UJay Bhuta, DPM , Ingcali yotyando lwabantwana e-Ankle & Foot Doctors yaseNew Jersey.
Esi sisibini sam sokuqala seBrooks esinconyelwe ngugqirha wam, omnye umvavanyi waseAmazon uthi. Ezi zihlangu zikhululekile kwaye zilula kodwa ziyaxhasa. Ndizisebenzise iiveki ezimbalwa ngoku kwaye zitshintsha umdlalo.
2Ixabiso elifanelekileyo lokuSebenzisa izihlanguNgaphantsi kweAssert eXhotyiswe ngezixhobo 8 IAmazon amazon.com $ 70.00$ 52.50 (25% icinyiwe) THENGA NGOKU
Kunye umphezulu ophefumlayo, ibhedi yeenyawo, kunye nenqanaba lokulinganisa leGoldilocks phakathi kwenkxaso kunye nokuguquguquka , ezi Under Armor sneakers zilungile kuzo zonke iimbaleki- ikakhulu kwiimbaleki zabo zexabiso. Olona phuculo lukhulu kukungena kwawo kwi-insoles, ekuthintela ukongeza ii-orthotic zakho.
Okwangoku bendinentlungu yeqatha ndide ndibeke ezi zihlangu kwaye yaphela ngoko nangoko, utshilo omnye umvavanyi waseAmazon, osokolayo ngamadolo kunye neentlungu zenyawo. Ngapha koko, zilungile ngokunxiba ngaphandle kweembaleki, nazo.
3Izihlangu ezibalekayo zoQeqeshoIASICS GT-1000 10 IAmazon amazon.com $ 99.95$ 84.96 (15% icinyiwe) THENGA NGOKU
Eyilwe ngegwebu ye-gel efunxa umothuko ngonyawo lwangasemva, olona hlobo lutshanje lwezihlangu ezibalekayo ze-ASICS kuthintela iintlungu ezihamba ngezithende ukuya kumathole nasemadolweni. Zakhelwe ngokukodwa yongeza unyawo lwakho ngendalo yesithende kwisithende esithende ukuya kwiinzwane , sikwenza ukuba usebenze ngakumbi, okanye, singathi, Ngesantya imbaleki.
Esi sihlangu sibalekayo sinamacala amabini amagwebu phantsi kwesithende kunye naphakathi, uGqirha Pruthi uyacacisa. Ngenxa yokuba ihambisa isithende ngakumbi, iyanceda ukunciphisa uxinzelelo kwii-Achilles. Oku ngaphezulu kwesihlangu esisezantsi sokubaleka esijolise kubantu abanomdla wokuzibiza ngaphezulu.
Ngaphezu koko, ukuba uziva ubundindisholo okanye unokonakala kwemisipha kwisithende sakho, uyakuxhamla kwijeli yonyawo lwangasemva, kuba iya kubonelela ngokuqinisa kunye nokunciphisa ukothuka kunye noxinzelelo kwithambo lesithende, uyongeza.
4Izihlangu ezibalekayo zePlantar FasciitisHoka Inye iBondi 7 iikho.one$ 150,00 THENGA NGOKU
Ezi zihlangu zibalekayo zinokubonakala zinkulu ngenxa yebhokisi yazo enkulu yeenzwane, kodwa zinobunzima obukhulu kwaye zine-invas e-EVA ekhutshiweyo ukuxhasa iingqameko zakho kunye nezithende. Kwaye, kunjalo iyilwe ngombala ovulekileyo ovulekileyo ukuvumela ukuhamba komoya okufanelekileyo . Nokuba usebenzisa i-5K okanye i-marathon yesiqingatha, ezi sneakers zilungile kwimimandla eyahlukeneyo.
Ezi zihlangu zinenkxaso enkulu kwisithende kwaye zilungele izigulana ezine-fasciitis yezityalo. Kukho irocker ebandakanyiweyo ngaphakathi kwesihlangu esilungileyo kwizigulana ezinesifo samathambo phakathi, utshilo uGqirha Bhuta.
5Izihlangu ezibalekileyo ezibalekayoKwiCloudflow IZappos zappos.com$ 139.95 THENGA NGOKU
Ukusebenza kweSwitzerland ukuqhuba uphawu kwi-On kudume kakhulu ngenxa yeenyawo zayo ezingaphezulu-kwaye ezokukhaba zinokuba zezona zilungileyo kwiqela. Cloudflow’s ubhetyebhetye, i-ultra-cushy outsole ibandakanya ii-18 pods eziguqula ifuthe libe kukukhawulezisa , Ukuqhubela phambili ngokunganyangeki kunye nentlungu. Kwaye, ezi zihlangu zibonelela ngokubambelela kwiindlela ezimanzi.
Ezi zihlangu zilula kwaye zikhululekile kangangokuba ndiziva ngathi ndithatha isantya sihlandlo ngasinye ndibaleka, ucacisa omnye umvavanyi weZappos. Ukuya kwam eBrooks, kodwa kule minyaka idlulileyo, khange ndonwabe ngendlela ebebambe ngayo. Ndifuna ububanzi obumxinwa ngakumbi ngesithende esisezantsi kunye nenkxaso engathathi hlangothi. Ezi zihlangu ziphawule zonke iibhokisi.
6Izihlangu ezibalekayo ezihamba umgama omdeIBrooks Ghost 13 IAmazon amazon.com $ 130,00$ 109.95 (15% icinyiwe) THENGA NGOKU
Ukuba uqeqesha ugqatso lomgama omde, ezi zihlangu zibalekayo zikulungele ngokukuko, zikuvumela ukuba unyuse iimayile ngaphandle kwentlungu. Ubunzima obungenasiphelo obuphezulu abuthinteli intshukumo, ngelixa i-sole-cushioned sole ikugcina ukwimo efanelekileyo, uphendula ngenkxaso kunye nokuphendula.
Iziporho kukuhamba kwam ixesha elide, ukunyamezelana, ukunyusa umvavanyi omnye weZappos, obiza oku kukhaba kokona kulungileyo wakha wazama. Zizihlangu endizithandayo zokubaleka, kwaye ndizamile ezininzi ngaphezulu kweminyaka engama-20 ndibaleka! Bane Inkxaso ye-arch emangalisayo kunye nokuthambisa okuhle kwiibhola zeenyawo , ukunciphisa ifuthe elibi lendlela egandathekileyo.
7Izihlangu ezibalekayo zokubalekaI-Nike Air Zoom Tempo NEXT% I-Nordstrom imvu.com$ 200.00 THENGA NGOKU
Nokuba uqhuba i-fartleks ezinje ngo-Usain Bolt kwingoma okanye wenza umsebenzi wesantya, ezi zikeyiki ze-Nike zisebenza ngokumangalisayo xa kufikwa ekubekeni amandla emva kwenyathelo ngalinye.
Esi sihlangu sinceda iimbaleki ezikufumanisa kunzima ukubaleka izihlangu ezisindayo kuzo njengoko esi sihlangu sinobunzima obugqithisileyo, utshilo uGqirha Bhuta. Umphezulu isonga unyawo lwakho njengesokisi yolungelelwano lwendalo , Ngelixa intwasahlobo yegwebu inika i-pep kunye namandla ngawo onke amanyathelo . Ii-insoles ezisuswayo zikwenza kube lula ukutshintsha kwi-orthotic yakho, kwaye indebe yesithende enzulu ikhuthaza uzinzo.
Itekhnoloji esetyenziswe kwesi sihlangu ayifani nayo nayiphi na into kwintengiso, ubhala omnye umvavanyi weNordstrom. Ndacinga ukuba ndiza kuzama into entsha kwaye ndiyavuya ukuba yenzekile. Andimilanga ngaphandle kwimbaleki yomgama omde ogqibe kwelokuba abuyele ekusebenzeni kwaye ezi zihlangu ziyenzile inkqubo ukuba ibe nzima.
8Izihlangu ezibalekayo zendlelaI-ASICS Gel-Venture 7 IAmazon amazon.com$ 64.95 THENGA NGOKU
Nokuba uhamba intaba okanye uhamba ngomkhondo, ezi zihlangu zibalekayo Uyilo lokutsala oluphezulu kunye ne-outsole ehlala ixesha elide ukumelana nazo zonke iintlobo zomhlaba . Banenkqubo yokuthambisa yejeli enceda ukufunxa ukothuka ngexesha lempembelelo, kufuneka ubenendawo enamatye okanye engalinganiyo.
Bendi Iintlungu emadolweni Ngelixa ndibalekayo kwaye ndifuna ukufumana isibini esixhasa ngcono i-underpronation yam, utshilo omnye umvavanyi, obalekela kwiimayile ezili-10 ubuncinci iintsuku ezintlanu ngeveki. Ezi zazifezekile, kwaye andizange ndibenantlungu ukusukela ngoko.
9Izihlangu ezibalekayo zeenyawo zakho zibanziEnye iParadigm 5 IAmazon amazon.com $ 150,00$ 109.31 (27% icinyiwe) THENGA NGOKU
Ibhokisi yeminwe ebanzi eyongezelelweyo kwezi zihlangu ivumela iinyawo zakho ukuba zidlale ngokwendalo, zibenze Isibini esifanelekileyo sabasetyhini abaneebhokhwe . Ezinye izinto ezintle zibandakanya i-midsole eboshwe ngokupheleleyo kunye nesithende seqonga elinceda umzimba wakho ukuba ulungelelanise, ukunciphisa ifuthe lokufika komhlaba. Ngapha koko, babonelela ngokukodwa kwiinyawo zabasetyhini, bexhasa isithende esincinci kunye nesantya esiphezulu.
Ngokwenyani ndineenyawo ezincinci kwaye bendicinga ukuba ezi ziya kuba banzi kakhulu kum, kodwa isihlangu uqobo siziva sikhululekile kwaye ibhokisi yeenzwane ebanzi iyanceda kakhulu, kubhala omnye umvavanyi. Ndineentlungu ezingaphantsi kakhulu kwaye kulula kakhulu ukuzibuyisa. Ekugqibeleni ndiyakubona oko abantu bandixelele kona ngesihlangu esifanelekileyo esenza umahluko omkhulu.
10I-Eco-Friendly Running Shoes efanelekileyoI-Allbirds Dashers yoMthi Zonke iintaka zintng.com$ 125.00 THENGA NGOKU
Kwiminyaka nje embalwa emva kokumiliselwa, ii-Allbirds ziye zathandwa ngokukhawuleza kwiindawo zazo ezixhasayo, ezoluliweyo phezulu, kunye nokukwazi ukuhlanjwa ngomatshini. Kodwa eyona ndawo inomdla yokuthengisa yinzalo yabo ezinzileyo: Yenziwe ngezixhobo ezinokuphinda zenziwe liQumrhu eliQinisekisiweyo leB , I-Tree Dashers ayiyi kukushiya uziva unetyala ngokukhetha izihlangu.
Ezi zezona zihlangu zibalekayo bendikhe ndaziphethe, umvavanyi omnye ujonga. Ukuthenga okugqwesileyo kwendakha ndenza. Ezi zihlangu zivakalelwa ngokungathi zenzelwe intsebenzo kwaye zikuxhasa njengokubaleka kwezihlangu.
Shumi elinanyeIzihlangu eziBalaseleyo zokuBuyisaISaucony Triumph 18 IAmazon amazon.com $ 150,00$ 114.95 (23% icinyiwe) THENGA NGOKU
Izicathulo zokubaleka ezine-Ultra zezona zilungileyo kwiintsuku zokubuyisela kwimeko yesiqhelo, xa intuthuzelo iphezulu kuluhlu lwakho lwezinto eziphambili. Le Saucony ikhabayo-isibini esinegama elitshatileyo-ilungile kule mihla. Uyaziva ngathi ubaleka emoyeni, enkosi intwasahlobo yodwa, ilungile, kwaye kuyakhiwa ngokumangalisayo okulula .
Ukuba uphakamisa okanye uneengqameko eziphakamileyo njengam kuya kufuneka uzame ezi, inqaku elinye lokujonga iAmazon. IArch ilungele iinyawo zam. Isithende sinyanzelwe ngenene. Inyawo langaphambili linokuba nesikhuseli esingaphezulu, kodwa isesisona sihlangu sibalaseleyo endinaso kwithuba elide.
12Izihlangu ezibalekayo eziBalaseleyoIbhalansi entsha 680v6 IZappos zappos.com$ 74.95 THENGA NGOKU
Uya kuwela umgca wokugqibela ngaphandle kokuziva unentlungu xa ushibilika kwezi zihlangu zibaleka kakhulu. Ezi sneakers zilula zibonelela kakhulu Inkxaso yeembaleki ezingathath'icala okanye abo baphakamisa kuba zakhiwe nge-foam midsole enceda ukukhuthaza umtya wendalo ngakumbi.
Iimbaleki ezine Iinyawo ezibilayo Kananjalo uyakuxabisa ukuba banomphetho ophefumlayo ogcina iinyawo zakho zikhuselekile kodwa zingathintelwanga. Ngokubanzi, ndizithanda kakhulu iiteki zebhalansi eNtsha. Zilungile kuba zinebhokisi ebanzi yeenzwane kunye ne-midsoles eshinyeneyo ene-cushioning evumela ukuzinza elunyaweni, utshilo uGqirha Pruthi.
13Izihlangu ezibalekayo zangaphakathiUmda weAdidas Lux 4 IAmazon amazon.com $ 85.00$ 67.99 (20% icinyiwe) THENGA NGOKU
Zakhiwe ngesithende esingqukuva, ezi zihlangu ziyilelwe ngonyawo lowasetyhini. Bayayixhasa kwaye ilungele ukusebenza ngaphakathi nangaphandle ngenxa yokuba zinamagwebu kuphela anceda ukufunxa ukothuka ngelixa ubonelela ngokubhabha okuphendulayo. Zikwanceda ukuphucula indlela obaleka ngayo ngokwendalo, enkosi kwii-insoles zabo ezinamathelisi kunye nokuthamba okuphezulu okwenziweyo.
Oku kufanelekile njengeglavu, omnye umvavanyi uyacacisa. Ngokufanelekileyo eyona ilungileyo, izihlangu zentenetya ezikulungeleyo endikhe ndazithenga.
14Izihlangu ezibalekayo zokupholisaUMizuno Wave Rider 24 IZappos zappos.com$ 99.95 THENGA NGOKU
Ikhaphukhaphu kwaye iyaphefumla, ezi Mizuno zibaleka izihlangu unenkqubo yokungenisa umoya yokupholisa ngokwendalo kunciphisa ubushushu kunye nokufuma ngaphakathi kwesihlangu sakho . Zikwabonisa ulwimi oluncitshiweyo kunye nolungelelwaniso oluphezulu ekuvumela ukuba uhambe ngokukhululekileyo ngenkxaso.
Umphezulu wangaphandle wesihlangu unerabha yekhabhoni evumela ukuqina kwesihlangu. Oku kuluncedo kwiimbaleki ezinesifo esiphakathi samathambo, kunye nesifo samathambo kuzwane lwakho olukhulu, utshilo uGqirha Bhuta. Kwaye ungongeza okokufaka kwakho ngenxa yokuba ine-insole ekhutshweyo, ebonelela ngokunyanzelwa kwaphakathi kunye nangaphantsi.
Shumi elinantlanuIzihlangu ezibalekayo eziDibeneyoNgaphantsi komoya wokuVelociti Wind underarmour.com$ 160.00 THENGA NGOKU
Ngaphantsi kwe-Armour's Flow Velocity Wind sneakers zenze amaza ngenxa yamandla abo anamandla kunye ne-ultra-grippy outsoles, kodwa siyabathanda ngokukodwa ukukwazi kwabo ukuxhuma kwi-app yeMapMyRun ye-brand. Ilungile lo nto: Izihlangu zakho ziya kulandelela ukubaleka kwakho kwaye zikuhlalutye iimetrikhi zakho .
Ndinqwenela ukuba ngendiyifumene i-Under Armor Flow ebaleka izihlangu kwiminyaka eyadlulayo, omnye ubuyekeza ubhala. Banenkxaso enkulu kwiiarches zam. Ndidla ngokuba neentlungu emadolweni emva kwexesha elide okanye i-sprints. Khange ndibenantlungu emva kokuzisebenzisa.
Ingelosi inombolo 555
Intsingiselo yenombolo 111
qhubeka ubona i-444
eyona mivalo yeeprotein yokunciphisa umzimba